Izindlela ezisebenzayo Zokushicilela uhlelo lokusebenza lwe-Android ku-Google Play Isitolo | Martech Zone
Izindlela ezisebenzayo Zokushicilela uhlelo lokusebenza lwe-Android ku-Google Play Isitolo
NgoMsombuluko, Novemba 18, 2019 NgoMsombuluko, Novemba 18, 2019 IHemant Parmar
Indlela elula yokusabalalisa uhlelo lwe-Android yisitolo se-Google Play. Kuyindlela eyindida kakhulu ukufika kumakhasimende amaningi kakhulu. Ukudlulisela isicelo sokuqala ku-Google Play Isitolo akuyona inkinga kangako, mane ulandele izeluleko ezimbalwa nohlelo lwakho lokusebenza olulungiselelwe ukulanda.
Abathuthukisi bohlelo lokusebenza lwe-Android balwela ukukunikeza uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu olungatholwa yizithameli eziningi. Uchithe isikhathi esiningi wenza uhlelo, ufeza zonke izinto ezingaba khona futhi unikele ngo-100% kuhlelo lwakho lokusebenza. Njengamanje, kuyithuba elihle lokuthumela uhlelo lwakho lokusebenza emhlabeni. Amakhasimende ashukumisayo angaphezu kwe-1 billion atholakala yonke indawo emhlabeni jikelele. Lesi sigaba esisodwa sizokusondeza ukuze uxhumane neqembu lakho lenzalo elihlosiwe.
Kunezinhlelo zokusebenza ezingaba yizigidi ezingama-2.47 ezifinyeleleka ku-Google Play Isitolo kanti izinhlelo ezungeze ama-3739 zethulwa nsuku zonke.
Izibalo, Inombolo Yezinhlelo Zokusebenza Ezitolo Zohlelo Lokusebenza 2019
Akekho ongakuphikisa ukubaluleka nokutholakala kwe-Google Play Isitolo endaweni yezicelo zeselula. Uma kwenzeka udinga ukwazi - ukuthi ungaletha kanjani uhlelo lokusebenza esitolo se-Google sokudlala, ngaleso sikhathi ukulandela kwakho kugcina lapha. Kunombono wokuthi kufanele ukulandela lokho ukuze udlulise ngempumelelo uhlelo lokusebenza esitolo se-google sokudlala. Ngokuhambisana nale migqa, kuthiwani ngokuqala kwethu.
Hlola isicelo sakho - Okokuqala, kufanele uvivinye uhlelo lwakho lokusebenza ngezindlela ezifanayo ngangokunokwenzeka futhi uqiniseke ngamaphesenti ayi-100 ukuthi luzokwenza okuhle, ngaphambi kokudlulisa uhlelo lokusebenza esitolo sokudlala. Ngokuvamile ungasebenzisa ama-emulators ngalesi sizathu. Usebenzisa igajethi elawulwa yi-Android izoletha inqubo yokuhlola eba namandla ngokwengeziwe. Izokunikeza ulwazi lokusebenzisa uhlelo lwakho lokusebenza kwigajethi yangempela futhi ikunike amandla wokudiliza noma yiziphi izimbungulu.
Usayizi ofingqiwe wesicelo - Ngesikhathi lapho wenza uhlelo lokusebenza, zama ukunciphisa usayizi wohlelo lokusebenza. Usayizi wangempela wanoma yiluphi uhlelo lokusebenza ubaluleke ngempela. Amaklayenti awasitholi isidingo sokulanda uhlelo lokusebenza oluthatha isikhala esikhulu ekuqoqeni kwenhlangano yabo yemishini. Ngempela, ne-Google ngokwayo ivumela usayizi wohlelo kuze kufike ku-50MB. Uma uhlelo lwakho lokusebenza likhulu kakhulu, uzodinga imibiko yokuthuthukiswa kwe-APK ukuyihlukanisa ibe ngamasegmenti ukuze idluliselwe. Kufanele umakwe ku-Google Play Console futhi ube ngumsabalalisi we-Play. Ngaphandle kokuthi uhlelo lwakho lokusebenza lweqa leli phuzu lokuboshwa, ngaleso sikhathi udinga ukusebenzisa irekhodi le-Android APK's Ukunwetshwa, ukuthumela ngempumelelo uhlelo lwakho lokusebenza. Lokhu kuzohlukanisa uhlelo lwakho lube yizigaba futhi ngoMeyi kufinyelele ku-2GB, kunikeze isikhala esingeziwe se-4GB kuhlelo lwakho lokusebenza. Imininingwane eyengeziwe iyasuswa ku-Google Cloud futhi iyatholwa nganoma isiphi isikhathi lapho isicelo sethulwa khona.
Thola Ilayisense Yohlelo Lokusebenza - Ngeke kukulimaze ukwenza ukuthi uhlelo lwakho lokusebenza ligunyazwe uze udlulisele uhlelo lwakho lokusebenza ku-Google Play Isitolo.
Gxila kwirekhodi le-APK nge-ID yenqwaba kanye nenombolo yenguqulo - Udinga ukusetha umbiko we-APK lapho ungabeka khona inombolo ehlukile yohlelo lwakho lokusebenza ezokusiza ngokuhamba kwesikhathi lapho udinga ukudlulisa omunye umbiko kuhlelo lwakho lokusebenza. I-Pack ID nayo ibizwa nge-App ID futhi isetshenziselwa ukwenza uhlelo lokusebenza lube olunye uhlobo, kuyingxenye ebalulekile lapho wethula uhlelo lwakho lokusebenza. Lokhu kungasebenza ekupheleleni kwezicelo ze-Android 5.0 noma ngaphezulu.
Kufanele usayine uhlelo lokusebenza ngazo zonke izitifiketi zokuphepha - Lesi yisivumelwano sobufakazi obumiswe kahle njenge-APK ozodinga ngaso sonke isikhathi lapho usabalalisa uhlelo lokusebenza ku-Google Play Isitolo. Lokhu kubizwa ngenye indlela njengombhalo we-JSK oqukethe izitifiketi, isibonelo, ibinzana eliyimfihlo le-Keystore.
Yenza uhlu lwakho lwe-App Store - Ukufakwa kohlelo lokusebenza kuyisici esinamandla esisiza uhlelo lwakho lokusebenza ekuthathweni kokulandwayo. Akuwona wonke umuntu onikela ngesikhathi sakhe ekuthumeleni uhlelo lokusebenza kepha kunalokho uma kwenzeka wenza lokhu ngaphambi kokudluliswa kwesicelo se-Android, uzothola imiphumela emangalisayo. Udinga ukunikeza idatha ethile kumakhasimende mayelana nokuthi hlobo luni lokusetshenziswa futhi yiziphi izici zalo.
Izinyathelo Zokushicilela Uhlelo Lokusebenza lwe-Android ku-Google Play
Ngaphambi kokuthumela uhlelo lokusebenza lwe-Android ku-Google Play, qiniseka ukuthi konke kulungiselelwe. Uzodinga ukuthathwa kwesikrini kohlelo lwakho lokusebenza (ngokulinganiswa okuphezulu), uhlaka lohlelo lokusebenza futhi, ngokusobala, idokhumenti ye-APK (uhlelo uqobo). Kunemikhawulo enzima ephathelene nosayizi wohlelo lokusebenza. Usayizi owedlulele kakhulu yi-100 Mbytes. Kungancanyelwa uma kungaphezudlwana kwama-Mbytes angama-50, ngaleso sikhathi amaklayenti ahlala ezindaweni ezinenethiwekhi embi angathola ithuba lokusebenzisa uhlelo lwakho lokusebenza. Nazi izindlela zokusabalalisa uhlelo lwe-Android ku-Google Play:
Dala i-akhawunti yomklami - Vula i-Google Play Console bese wenza i-akhawunti yonjiniyela. Kubiza malini ukusabalalisa uhlelo lokusebenza lwe-Android? Umsebenzi ubiza u- $ 25. Ukhokha kanye nje, irekhodi likunikeza ilungelo lokusabalalisa inombolo efanayo yezicelo njengoba udinga noma nini nanoma iyiphi indawo.
Thayipha isihloko nokuboniswa kohlelo lwakho lokusebenza - Kungukuhlakanipha ukukucabangela ngaphambi kokusabalalisa. Lapho wenza ukuhlola okusesha amagama wokubuka ukuwafaka ekubonisweni kohlelo lwakho lokusebenza. Into yokuqala umsebenzisi ayibonayo igama lesicelo, okuthile okuhehayo kusiza ukuthola ukunakwa kwanoma yimuphi umsebenzisi! Ukugxila kufanele kube egameni elimnandi nelichazayo.
Faka ukuthwebula kwesikrini - Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi isithombe-skrini sinekhwalithi ephezulu. Qiniseka ukuthi izithombe zibonisa ukugqama okungajwayelekile okukuhlelo lwakho lokusebenza, noma umcabango oyinhloko wohlelo lokusebenza.
Nquma isilinganiso sokuqukethwe sohlelo lwakho lokusebenza - Okwamanje, kufanele uphendule imibuzo embalwa ukuze unqume isilinganiso sento yento yakho. Kulindeleke ukuthi kukhawulele izingane ekulandeni uhlelo lwakho lokusebenza uma kuqukethe okuqukethwe kwabantu abadala. Ungaphendula kangcono empeleni uma kungenjalo uzonqatshwa ekukhipheni uhlelo lokusebenza lwe-Android ku-Google Play.
Khetha ukuhlukaniswa kohlelo lokusebenza - Kuyaphawuleka futhi ukuthi kuphakamisa izingqinamba zakho ekulandweni. Uma ukhetha ukukhetha ukuhlukaniswa okungafanele, abantu ngeke babe nenketho yokukubona ekilasini okufanele kube njalo!
Lawula izingqinamba zendlela yokuvikela - Uma kwenzeka uhlelo lokusebenza lusebenzisa noma yiluphi ulwazi lwamakhasimende azimele oludingayo ukukhombisa lokho futhi lubandakanye indlela yokuvikela lapho uqinisekisa ukuthi lolu lwazi alusebenzisi inzuzo yakho. Ngecebo lezokuphepha kufanele udalule kumakhasimende ukuthi yiluphi ulwazi oluzoqoqwa, ukuthi le datha izophathwa kanjani nokuthi ngubani ozokuya kuyo.
Iqiniso lokuthi amaphesenti angama-42 omphakathi womhlaba asebenzisa imithombo yezokuxhumana yisizathu esanele sokuthi kube yipulatifomu engcono kakhulu yokukhangisa.
Uma ubucabanga ukuthi ngemuva kokudlulisela ngempumelelo uhlelo lokusebenza ku-Google Play Isitolo ungaphumula ezihlahleni zakho. Kunemisebenzi eminingi okudingeka yenziwe iya phambili! Impilo yohlelo lwakho lokusebenza ngemuva kokushicilela incike kuwe (noma iqembu elikusebenzelayo). Isikhathi esiningi, ukuxhaswa ngemuva kokuqaliswa kukhomba ukufinyelela kohlelo lokusebenza nokuthi kube lusizo kangakanani kubasebenzisi.
I-hack engcono kakhulu lapha ukuvula amaklayenti akho. Amaklayenti e-Dynamic ayimihlahlandlela engcono kakhulu. Bangabelana ngeziphazamiso ezinokuqonda ezivela kubasebenzisi bangempela ezingalungiswa ngokufanele. Uma kwenzeka usebenzisa ukugxekwa kwamakhasimende njengomthombo wemininingwane ebalulekile uthola wonke amathuba okukhulisa imali nokwenza kube ngokujwayelekile
Ufuna ukuthuthukisa uhlelo lwakho lokusebenza lweselula? Xhuma kithi, Sysbunny iyinkampani yokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza yeselula efunwayo ethuthukise ukwakheka okuhle, nokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lweselula olusabelayo olusheshayo.
Tags: google ukudlala esitolouhlelo lokusebenza lweselulashicilela uhlelo lokusebenzashicilela uhlelo lokusebenza lweselulasysbunny
UHemant Parmar ungonjiniyela onomusa, ukuqoqa ulwazi oluningi kukho konke ukuthuthuka kwezobuchwepheshe kwanamuhla kanye nesizinda sebhizinisi esiqinile seminyaka engaphezu kwengu-9 yesipiliyoni kumenza abe ngumxhumanisi onentshiseko kulo mkhakha. UHemant nguyena othola izimpendulo kumakhasimende akhe ukuze abasize ekwakheni nasekugcineni ubudlelwano obuqinile emakethe.